Posted by शाक्षात सुशिल at 13:57 No comments:
घाम डुबिसक्यो, एक हुल ठिटीहरू बोतल ठाडो घाँटी लगाउदै हिडिरहेका छन् । कम्प्युटरको एक कुनामा टाइप गर्दै गर्दा अर्को कुनाको ई-बेमा टेलिस्कोप सम्बन्धी वेब साइट खुल्लै छ । किनौ की भनेर सोच्दै छु ।
काकालाई सम्झिन्छु । नारायण काका । मेरो बाल्य अवस्थालाई सबै भन्दा बढी प्रभाव पार्ने मान्छे । बर्खर काठमाडौंबाट बसाईसरी गएको हेटौंडाको सुरुवाती जीवन थियो । उहाँ सात-आठमा पढ्नु हुन्थ्यो, म दुईमा । बोल्दा सानै कुरामा पनि झर्केर थर्काउने । लोटाको पानी थोरै पोखिएर काकाको खुट्टामा पर्‍यो भने जोडले गर्जिने ' लगेर मलाई राप्तीमा डुबाइदेन, आनन्दै हुन्थ्यो नी । '
काका अत्ति एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो । एकदिन उहाँले चित्र बनाएको देखे, खासै राम्रो होईन । त्यो देखेर मैले पनि चित्र बनाउन थाले । कागजमा मात्र होईन, छिनो र हम्मर लिएर भेटिएको काठको मुडोमा मान्छेको आक्रिती खोप्थे ।
एकदिन काकाले भन्नु भयो हाम्रो देशको बिकास गर्न बिज्ञानको बिकास गर्नुपर्छ । बैज्ञानिक आविस्कार गरेर नेपाललाई बिकसित बनाउन सकिन्छ । सानो भुरो म । के बुझम ? तर दंग थिए, ' काकालाई यस्तो कुरो कहाँबाट आउछ ?' लहलहैमा लाग्थे । बाढी आएको थियो राप्तीमा । खेतको कुलोको एक भागमा प्वाल पारेर बाँसको नली घुसार्यौ । साइकलको टायरको डाइनामोमा चप्पल गोलो बनाएर काटेको चक्की जोड्यौ र सानो बत्ति जोड्यौ । बत्ति बलेन । त्यसो त माइकल फराडेले पनि कहाँ एकै पटकमा बिजुली निकालेको हो र ? चित्त बुझायौ ।
एकदिन काकाले सुटुक्कघर पछाडि बोलाएर सानो स्वरमा भन्नु भो ' एउटा कार्बाइट भन्ने चीज हुन्छ, केरा पकाउने मेटरियल । त्यसलाई प्रयोग गरेर बम बनाउनुपर्छ ।' म तयार । काका पनि तयार तर मेटिरियल किन्ने पैसा छैन् । २५ रुपैया । त्यो बेला हातमा धेरै परे दश रुपैया, त्यो पनि दशैमा । मेरो घरको दराज लुट्ने जिम्मा मेरो, काकाको दराज लुट्ने जिम्मा काकाको । बल्ल जुट्यो २५ रुपैया । श्री रक्सिको बोतलमा थोरै पानी र कार्बाइट हालेर बिर्को टाइट गरेर भाग्यौ । ठीक टाइममा अर्को काकाको छोरो गिज्याउदै आयो । पानी हालेर बम काहीबम पड्किन्छ भन्दै नजिक गएको मात्र थियो बेजोड सँग पड्कियो । सिसाको एक टुक्रो उसको तिघ्रा छोएरै गयो । रगतको धारो बग्यो । काका र मेरो भागा भाग । घर फर्किनासाथ आमाले गालामा एक थप्पड बजाउनु भयो । मैले थप्पडको कारण सोध्नु आवश्यक ठानिन । खुरुक्क भान्सामा बसेर रुन थाले । खोलाको किनारमा हिड्दा ध्यान दिएर हिड्यो भने बहुमुल्य हिरा मोती भेट्न सकिन्छ भनेर आफ्नो गाई बस्तु धपाउदै कम्ता हिडाउनुभएन । म पनि हिरै पो भेटिन्छ की भनेर् पछि लाग्थे तर पर पर पुगेको काकाको गाई बस्तु बाहेक केही भेटे मार्दिनु ।
भर्खर् भर्खर् गोबर ग्यासको कार्यक्रम आएको थियो । काकाले ग्यालेनमा गोबर भरेर आगो बाल्ने बिचार गर्नु भयो । प्लास्टिकको ग्यालेनमा भेटेजती गोबर खोजेर भरियो र ग्यालेन टाइट गरियो । १० देखि १५ दिन भित्र ग्यास निस्किने र त्यो ग्यासमा आगो बालेर चिया सम्म पाक्ने काकाको भबिष्यबाणी थियो । धेरै दिन राखे ग्यालेन नै पड्किन सक्ने भएकोले काका सजग हुनुहुन्थ्यो । बल्ल बल्ल बितेको १५ दिन पछि ग्यालेनको बिर्कोमा पाइप जोड्दा ठ्वास्स गनाउनु बाहेक केही भएन, चिया पाकेन । गोबरबाटै ग्यालेन पड्किएको भए सायद माओवादी जनयुद्धमा ’गोबर बम’को रुप प्रशिद्धी पाउथ्यो होला । हाम्रो नाम आउथ्यो होला । तर भएन ।
चिकित्सा बिज्ञानमा आयाम थप्ने सुरमा काकाले धेरै भ्यागुतोको भुँडी टोपाज ब्लेडले काटेर छोड्नु भएथ्यो खोलामा । म त भ्यागुतो समात्ने जिम्मा पाएको थिए । काका भन्नुहुन्थ्यो डाक्टर बन्नु अघि सबै यसै गर्छन् । भ्यागुतो भुँडी निस्किएर हरिबिजोग गरेर उफ्रिन्थे । म त भुरो, के बुझम । डाक्टर बनिन्छ की झै लाग्थ्यो ।
काकाले मुलधार छोड्नु भयो । अब संगीत तर्फ लाग्नुपर्छ भन्न थाल्नुभयो । काठमाडौं गएर डोरेमिफामा संगीत पनि सिक्नुभयो र हेटौंडा हार्मोनियमका साथ फर्किनुभयो । मलाई गाउन लगाउनुहुन्थ्यो म कनी कनी नारायण गोपालको यो ”मुटुलाई कसरी सम्झाई बुझाउ...” गाउथे । काका मेरो स्वरमा मन्त्रमुग्ध भएर हार्मोनियम बजाउनुहुन्थ्यो । र भन्नुहुन्थ्यो अलीकती तान्न सिक्यौ भने तिम्रो गायन क्षेत्रमा भबिष्य राम्रो छ । बडो प्रभाबित भए आफै देखि । शुक्रबार कक्षामा त्यहि गीत त्यसैगरी गाएको कसैले वास्ता गरेनन, सुनेकी सुनेनन कुन्नि । तर काका माथि बिश्वासमा कमी भएन । संगीतको बिकाससंगै ब्यवसाय स्वरुप काकाले फिल्मको सिडी भाडामा दिने पसल थाप्नुभयो । काकाको ब्यस्तताले संगत छुट्यो । केही समयपछी भेट्दा थाहा भयो मान्छेहरू सिडी लग्दा रहेछन तर फिर्ता ल्याउदा रहेनछन । बिस्तारै सिडी पसल खालि भयो । ब्यवसाय टाट पल्टिएछ । संगीतको माध्यमबाट देशको बिकास गर्ने योजना तुहियो ।
काका साहित्यमा लागेर केही गर्नुपर्ने बिचार राख्नु थाल्नुभयो । जीवनमा एउटा किताब लेखेर मात्र मर्नु पर्छ भन्दै नेपाली कापीको अन्तिम पन्नामा बिरक्त मानिस हिडिरहेको बिषयमा एकपाना लेखेर देखाउनुभयो । म त भुरो के बुझम ? जीवनमा एउटा किताब लेख्नै पर्ने रहेछ भनेर मैले पनि एउटा नयाँ कापीको पहिलो पन्नामा केही लेखेको थिए । शिर्षक 'रगत' थियो । चार कक्षामा पढ्दा के लेख्न सक्थे र ? स्वाभाबिक हो, अधिकांस हिन्दी फिल्मसँग मिल्दो जुल्दो थियो कथा ।
चार कक्षापछी काठमाडौं नै बसाई सर्यौ । काकाको संगत छुटे पनि काकाले जगाइदिनुभएको भोक साम्य भएन । ५ कक्षा देखि नै राम्रो कबिता लेख्न सक्ने बनेछु । प्रथम पुरस्कार पनि पाए । ६-७ मा पढ्दा चित्रकला प्रतियोगिताको जिल्ला स्तरिय प्रतियोगितामा प्रथम/ दितिय बनिसकेको थिए । झन बिज्ञानको भोक त कहाँ मेटिन्थ्यो र ? आफैले बारुद बनाएर तिहारमा पटका पड्काउन सक्ने भैसकेको थिए कक्षा ८-९ तिर । टेबल टेनिसको बल प्रयोग गरेर रकेट झै काम गर्ने एउटा सानो गाडी बनाए तर मैतिदेबीमा गरिएको त्यो परिक्षण असफल भयो । गाडी थोप्पो अगाडी बढेन । कक्षामा सरले आवर्तनिय (refractive) टेलिस्कोपको बारेमा पढाउनुहुन्थ्यो,म परावर्तनिय (reflective) टेलिस्कोप आफैले बनाएर स्कुल लान्थे । त्यो टेलिस्कोप कति शक्तिशाली थियो, त्यो त थाहा भएन तर आफैले बनाएको भएर होला गर्व लाग्दो रहेछ । प्रदर्शनी मार्गबाट सिहदरबार अगाडीको होर्डिङ बोर्डमा लेखेको सबै अक्षर पढ्न सकिन्थ्यो । खालि आँखाले हेर्दा धर्को मात्र देखिन्थ्यो । माओवादीलाई आतंककारी घोषणागरेपछी स्कुलको सरको निर्देशन अनुसार बिज्ञानका सबै सामान टुकुचा फ्याक्न वाध्य भए ।
काकाले भने झै खोलामा बहुमुल्य हिरा मोती त कहिले भेटिन तर खोलाले बगाएर ल्याएको हाँगाबिङा र जराहरूलाई पेन्टिङ गरेर कलात्मक बस्तु बनाउन सके । पछी त्यहि जरा कलेज पढ्दा बिद्या देबी भण्डारीलाई उपहार स्वरुप दिएँ पनि । एक ब्रिटिश शिक्षक ४२५ पाउन्ड पर्ने, खोलाले बगाएर ल्याएको जराबाट बनेको कुर्सीको फोटो हालेका छन फेसबुकमा । काम नलाग्ने जराबाट त्यस्तो सम्म बन्दो रहेछ ।
काकालाई नभेटेको पनि करिब ९-१० बर्ष भईसकेछ । अझै पनि सोच्दै छु ७ कक्षा पढ्दा देखि काका कसरी त्यति ट्यालेन्टेड हुनुभयो ? म त भुरो थिए लहलहैमा लाग्थे तर काकालाई धेरै कुरा थाहा रहेछ सानै देखि । मैले बनाएको टेलिस्कोप पनि हराइसक्यो । सोच्दै छु यहि ई-बे बाट एउटा टेलिस्कोप किन्नुपर्ला । आफैले बनाए जस्तो माया लाग्दो त छैन तर धेरै पावरफुल छ ।
Posted by शाक्षात सुशिल at 12:04 No comments:
थप छलफल पढ्न :
Posted by शाक्षात सुशिल at 07:07 No comments:
मोडर्न मुना मदन
मुना र मदन सानै देखि एकै कक्षामा पढ्दै हुर्किए । संगै स्कुल जान्थे । संगै खेल्थे । संगै पढ्थे । नौ कक्षामा टेकेलगतै मुना र मदनमा जवानीका परिवर्तन देखा पर्न थाले । मदन भित्र भित्रै मुनालाई मन पराउन थाल्यो । स्कुल जाने क्रममा एकदिन प्रेम प्रस्ताव पनि राख्यो तर मुनाले साथी बाहेक अरु सोच्न नसक्ने भन्दै अस्विकार गरिन ।
त्यसपछी मदन मुनाको साथ पाउन तड्पिन थाल्यो । मुना भने मदनबाट टाढा भाग्न थालिन । दुबै एसएलसी सके । मदन अझै मुनालाई बिर्सिन सकेँन । प्लस टु समेत मुना पढ्ने कलेजमा भर्ना गर्‍यो तर मुनाले बाल दिईनन । प्लस टु समेत मुनाको पछि लागेर सक्यो मदनले । अन्तमा हार खायो र मुनाबाट टाढा जाने निर्णय गर्‍यो । बाँकी अध्ययन पूरा गर्न अमेरिका जान कस्सियो ।
तीन पटक लगातार असफल भएपछि बल्ल अमेरिका जाने भिसा पायो । मदनले अमेरिका जाने भिसा पाएको कुरा साथिहरू मार्फत मुनाको कानमा पर्‍यो । उनको मनमा प्रेमको अँकुरण भयो । कता कता मदनलाई भित्रै देखि माया गर्न थालेको भान भयो । तर मदन अमेरिका जादै थियो । उनलाई आफ्नो प्रिय ब्यक्ति सदाको लागि टाढा जान लागेको महसुस भयो । उनमा छट्पटी बढ्दै गयो । सपनामा समेत मदन प्लेन चढेको देख्न थालिन । अमेरिकाको चिल्लो सडकमा गाडी कुदाउदै गरेको देख्न थालिन ।
त्यसपछी उनले आफूलाई सम्हाल्न सकिनन र मदनलाई भेट्न गइन । गह भरी आसुँ लिएर मदनको हात समात्दै प्रेमको भिख मागिन । आफू पनि बच्चै देखि मदनलाई मन पराएको तर भन्न नसकेको भनेर सम्झाउन खोजिन तर मदन मानेन । मुनाको हात आफ्नो हातबाट हटाउदै भन्यो " तिमी नेपालमा हुने छौ, म अमेरिकामा । यस्तो अवस्थामा प्रेम रहन सक्दैन । तिमी आफ्नो जीवनसाथी यहि कतै खोज " यदि भन्दै मदन हिड्यो । मुना रोइरहिन । टाढा सम्म मदन हिडिरहेको हेरेर आसु झारिरहिन ।
अमेरिका पुगेपछि मदनको नयाँ दिनहरू सुरु भयो । बिहान उठेदेखी कामको खोजीमा पेट्रोल पम्प र स्टोरहरू धाउन थाल्यो । दुई महिनाको अबिरल खोजपछि भारतिय मुलको महिलाको पेट्रोल पम्पमा काम पायो । केही समय काम र पढाईलाई सँग संगै लग्यो तर कलेज फी तिर्ने बेला काम गरेर कमाएको सबै पैसा बुझाउदा मन कुटुक्क काटियो । त्यसपछी उसले पढाई छोडेर काम मात्र गर्न थाल्यो । बल्ल भने राम्रो पैसा जोगाउन थाल्यो ।
उता नेपालमा मुना मदनको प्रेममा छट्पट्टिएर बेहाल भएकी थिईन । त्यहि भएर उनले पनि अमेरिका गरेर मदनलाई भेट्ने मनमनै अठोट गरिन र डिभी भरिन । सच्चा मनले चाहेको कुरा भगवानले समेत जुराउछन । उनलाई डिभी पर्‍यो खुशिको सिमाना रहेन । डिभी परेको यति खुशि भईन की मदनलाई भुल्न पुगिन । यसै अमेरिका जाने उसै अमेरिका जाने भनेर मदनलाई खबर गर्नु आवश्यक ठानिनन । दोस्रो पत्र आए लगतै उनी अमेरिका उडिन ।
सुरुका दिनमा धेरै गाह्रो भयो अमेरिकामा । काम पाइएन । बल्ल बल्ल पाएको काम पनि तीन घण्टा गाडी चलाएर जानुपर्ने ठाउँमा । जसो तसो गरि मदन बसेकै राज्यमा एउटा पसलमा सामान मिलाउने काम पाईन । यो कुरा मदनले साथी मार्फत थाहा पायो । त्यसपछी मदनमा आफ्नो प्रेम फर्किएको अनुभव भयो । भित्रै देखि फेरि मुनालाई चाहन थाल्यो । एकदिन बल्ल बल्ल ठेगाना पत्ता लगाएर मुना भएको स्थानमा पुग्यो ।
मुनालाई देख्नासाथ न्यानो अँगालो मार्यो र भन्यो " मुना म तिमीलाई अझै सम्म बिर्सिन सकेको छैन । आइ स्टिल लभ यू " मुनाले अँगालोबाट फुत्किदै भनिन " तर बागमतीमा पानी धेरै बगिसक्यो । अब म तिमिलाई माया गर्न सक्दिन । तिमी आफ्नै खालको जीवन साथि खोज " मदन छाङाबाट खसे जस्तै भयो । आज भोलि गर्दै बिस्तारै उसको अमेरिकाको भिसा सकिने मिती नजिकिदै थियो । त्यसपछी उसलाई नेपाल फर्किनुपर्छ भन्ने डरले पोलिरहेको थियो । त्यसकारण मदन झन् झन् मुनालाई माया गर्न थाल्यो ।
उनलाई पाउन अमेरिकामा पनि तड्पिन थाल्यो । बिस्तारै भिसा सकिने मिती नजिक आयो । मदनसँग दुई वटा बिकल्प रह्यो की शरणार्थी बनेर बस्ने की अमेरिकी नागरिकता भएको युवती सँग बिहे गरेर बस्ने । धेरै दिन सम्म बिहे गर्न मिल्ने युवती खोज्दै बाटोमा हिंड्न थाल्यो तर फेला पार्न सकेन । एकदिन काम गर्दै गर्दा आफ्नो पसलको साहुनी देख्छ । पूर्वपती सँग पारपाचुके गरेर आफ्नै पेट्रोल पम्प चलाएकी, आफू भन्दा दोब्बर उमेरको भए पनि अनुहारमा चमक हराएको थिएन । मदन मन मनै साहुनीसँग बिहे गर्ने सपना देख्छ । कहीले गिफ्ट किनिदिने त कहीले घुमाउन लग्ने गर्न थाल्छ । एकदिन साहुनीलाई आफ्नो चोखो मनको प्रस्ताव राख्छ । साहुनी पनि एक्लो जीवनबाट मुक्त हुन प्रस्ताव स्विकार्छिन । हेर्दा हेर्दै मदनको भिसाको समस्या मात्र होईन रोजी रोटी समस्या समेत समाधान हुन्छ । साहुनीको नाममा भएको दुई वटा पम्पको मालिक बनेर इज्जतसाथ जिन्दगी बिताउन थाल्छ ।
तर उता मुनाको हालत खराब हुन्छ । अर्थतन्त्र धराशायी भएको भन्दै कामबाट निकालिन्छिन । भिसा छ तर काम छैन् भनेर उनको मन धेरै रुन्छ । चारैतर्फ काम खोज्न भौतारिन्छिन । एकदिन काम खोज्ने क्रममा एउटा पेट्रोल पम्प पुग्छिन । त्यहाको काम गर्नेले साहु बस्ने स्थान देखाइदिन्छन । जब त्यहा पुग्छिन मुना फेरि छाङ्गाबाट खसे जस्तै हुन्छिन । साहु त मदन हुन्छ । त्यत्रो ठुलो पेट्रोल पम्पको साहु मदनलाई देख्दा मुनाको मनमा फेरि पुरानो प्रेम सल्बलाउन थाल्छ । अन्तर्वार्ता दिन गएकी मुना प्रेमबार्ता गर्न चाहन्थिन तर मदनले बिष्णुमतीमा धेरै पानी बगिसकेको भनेर उनको प्रेम प्रस्ताव फेरि ठुक्राउछ । र आफ्नो जीवनमा कहिले फर्केर नआउन चेतावनी दिन्छ । त्यसपछी मुना मदनलाई सम्झेर रुदै रुदै आफ्नो बाटो लाग्छिन ।
मदन र भारतिय महिलाको पेट्रोल पम्प विश्वब्यापी आर्थिक संकट आएपछि टाट पल्टिन्छ । दुबै जना ऋणमा चुर्लुममा डुब्छन । ऋण तिर्न नसकेर भारतिय महिलाले आत्महत्या गर्छिन । पत्नी बियोग, ऋणको समस्या र मुनाको सम्झनाले गर्दा मदनको मानसिक सन्तुलन हराउने स्थितिमा हुन्छ । फलस्वरुप मदन दिन दिनै रक्सी पिउन थाल्छ । उता मुनालाई एक डलरमा किनेको लोट्टोमा अचानक १०० मिलियन डलर पर्छ । यो खबर पाए लगतै हतारिएर बुझ्न पसल तीर गाडी चलाएर जान्छिन । आफ्नो जिन्दगीको सबै दु:खका दिन जाने भएर भनेर अत्ती खुशि भएर दुई हात छोडेर गाडी चलाउदै गर्दा मदन रक्सीले फिट्टान भएर सडकको बीच आइपुग्छ । मदनलाई बचाउन खोज्दा मुनाको गाडी भित्तामा ठोक्किन्छ । मदन हत्तपत्त मुनाको गाडी भित्र हेर्छ । रगताम्मे मुना अन्तिम श्वास फेर्दै हुन्छिन । मदनले मुनाको आँखामा हेर्छ र हात समातेर संगै स्कुल गएको दिन सम्झिन्छ । पाखुरा हेर्छ संगै छोइडुम खेलेको सम्झिन्छ । कम्मरमा हेर्छ संगै इन्टुमिन्टु खेलेको सम्झिन्छ । र हातमा हेर्छ लोट्टो देख्छ । र सोच्छ पक्कै पनि यो पल्टको १०० मिलियनवाला लोट्टो हुनुपर्छ भन्दै खोसेर लिन्छ । लोट्टो खोसिएपछी मुनाको प्राण फ्यास्स जान्छ । कसैले देख्ला भनेर लोट्टोको कागज लिएर डौडिन्छ । लोट्टो पाएपछी हाई वे हो भन्ने पनि बिर्सिन्छ । पछाडीबाट एउटा गाडीले बजाइदिन्छ । उसको पनि तत्काल मृत्‍यु हुन्छ ।
Posted by शाक्षात सुशिल at 09:42 1 comment: